हकप्रद सेयर जारी गर्न दिएर पुँजी वृद्धिको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले नै ‘पङ्गु’ बनायो « Clickmandu
प्रकाशित मिति : २० पुष २०७८, मंगलवार १९:१९
कृषि, होटल, रियलस्टेट, सूचना प्रविधि, नविकरणिय उर्जा तथा उत्पादनमुलक उद्योगमा लगानी रहेको गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष हुन्, पवन गोल्यान । एनएमबि बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) को समेत अध्यक्ष रहेका गोल्यान विदेशी ब्राण्डको एजेन्सी लिने र त्यसमा गर्व गर्ने व्यवसायीका कारण स्वदेशी उत्पादन बढ्न नसकेको बढाउँछन् । त्यस्ता व्यापारीले नै राज्यका विभिन्न निकायमा पदासिन व्यक्तिलाई बैंकका विरुद्धमा लाग्न उक्साइरहेको र सोही अनुसार नियामकले माइक्रोम्यानेजमेन्ट गरिरहेको गोल्यानको दावी छ । गोल्यान अध्यक्ष रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको संगठन (सिबिफिन)ले राष्ट्र बैंकको चुक्ता पुँजी बढाउने नीतिका कारण अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या आइपरेको र विभिन्न साइडइफेक्टहरु पनि देखिएको प्रतिवेदन गत सातामात्रै सार्वजनिक गर्यो । ठूला बैंक बनाउने उदेश्यले ल्याइएको पूँजी बृद्धिको नीति हकप्रद शेयर जारी गर्न दिएकाले पङ्गु भएको बताउने गोल्यानसँग सिबिफिनले ल्याएको प्रतिवेदन र बैंकिङ प्रणालीका जोखिम र अर्थतन्त्रको विषयमा क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल र शरद ओझाले गरेको कुराकानीः
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने नीति ल्याएको साढे ६ वर्ष र कार्यान्वयन भएको ४ वर्षपछि तरलता अभावको कारण नै पुँजी बृद्धि हो भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले सार्वजनिक गर्यो । अहिले आएर तपाईंहरुले पुँजी बढाउने नीति खराब थियो भन्नु कतिको सान्दर्भिक होला ?
तपाईंले रिपोर्टको एउटा लाइनमात्रै झिकेर हुँदैन । त्यसको पृष्ठभूमिपनि बुझ्नुपर्छ । गभर्नरसा’पले बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उदेश्यले पुँजी वृद्धिको नीति ल्याइएको थियो । बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँदा वाणिज्य बैंकको संख्या १५/१६ मा सीमित हुन्छन् भन्ने थियो । नीति घोषणा गर्दा मर्जरमा पनि जोड दिइएको थियो । तर, पछि दबाब थेग्न नसकेर हकप्रद सेयर जारी गर्न दिइयो । जसले गर्दा यही प्रणालीबाटै पुँजीवृद्धि गरियो । पुँजीको केही प्रतिशत राष्ट्र बैंकमा जम्मा भयो । बैंकमा थुप्रियो । तर, प्रणालीबाट पुँजी बाहिरियो । जसले गर्दा केही समस्या भयो ।
अर्काे कुरा, धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरबाट भन्दा पनि हकप्रद सेयर जारी गर्दै पुँजीवृद्धि गरे । पुँजी बढेअनुसार आम्दानी बढाउनु पर्ने दबाबमा बैंक थिए । प्रतिसेयर आम्दानी, लाभांश पुँजी वृद्धि पूर्वको अवस्थामा कायम राख्ने चूनौती थियो । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रुपमा लगानी गरे । गभर्नर सापको नीति म मर्जर गराउँछु भन्नेमा थियो । मर्जर हुँदा संख्या घट्छ र त्यसले दिगोपना ल्याउँछ भन्ने थियो । त्यसैले उक्त नीति राम्रो थियो । तर, जसरी हकप्रद सेयर जारी गर्न दिइयो त्यसले राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिलाई असफल बनाइदियो ।
तत्कालिन समयमा तपाईंहरुले नै हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनु पर्यो भनेर लविङ गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार तपाईंहरुले पनि मर्जरलाई जोड दिएको भए पनि हुन्थ्यो नि । अहिले आएर उक्त नीति गलत थियो भन्न मिल्छ र ?
राष्ट्र बैंकको उक्त नीति आउनुभन्दा अघिनै म अध्यक्ष रहेको एनएमबि बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने तयारी गरेका थियौं । पछि वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने नीति आयो । यदि यो नीति पहिले नै आएको भए हामीहरु पनि विकास बैंकभन्दा पनि वाणिज्य बैंकलाई नै मर्ज गर्ने थियौँ । हामीले त हकप्रद सेयर जारी गरेनौँ । हकप्रद जारी गर्नेले गलत नै गरे भन्न मिल्दैन ।
राज्यले लुपहोल दिए सबैले फाइदा उठाउन खोज्छन् । हामीले हकप्रद सेयर जारी नगरेकाले मैले पनि धेरै गाली खाए । मेरो बैंकका सेयरधनीले पनि हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्याे भन्ने माग गरेका थिए । हामीले हकप्रद सेयर जारी गरेको भए एकपटकलाई हामीलाई फाइदा हुन्थ्यो होला । तर, हामीले एकपटकको फाइदा हेरेनौं ।
सरकारले नीति ल्याउनुभन्दा पहिले त्यसको दुरगामी असर कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्याे । म फेरि पनि भन्छु पुँजी वृद्धि गर्ने नीति गलत थिएन । तर, जसरी हकप्रद सेयर जारी गर्न दिइयो त्यो गलत थियो । हकप्रद सेयर जारी गर्न दिएर पुँजी वृद्धिको नीतिलाई नै काम नलाग्ने बनाइयो । त्यसले विकृतिमात्र जन्मायो ।
हकप्रद जारी गर्न दिने नीति कसरी गलत थियो ?
किनभने, देशलाई यतिधेरै वाणिज्य बैंक चाहिएको छैन । २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीमा बैंक चलिरहेकै थिए । ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका यतिधेरै वाणिज्य बैंक आवश्यक थिएनन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको साइजअनुसार हामीलाई १५ देखि १८ भन्दाबढी वाणिज्य बैंक आवश्यक छैन । हाम्रो साइज बराबरको अर्थतन्त्र भएका कुनै पनि देशमा यतिधेरै बैंक वित्तीय संस्था छैनन् । प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्छ । तर, अहिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । कर्जा वा बचत दुबैका लागि तानातानको अवस्था छ । यो कसैका लागि पनि राम्रो होइन । ग्राहकहरु कहिले कता कहिले कता पुग्छन् । राम्राभन्दा पनि कमसल प्रकृतिका ग्राहकहरु यताउति बढी गर्छन् । यसको कारण बैंकको संख्या धेरै हुनु हो ।
पुँजी वृद्धिको नीतिले बैंकको संख्या घटाउन सकेन् । अब कसरी घटाउने ?
राष्ट्र बैंकमात्रै नभएर नेपाल सरकारले नै मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । ठूला संस्थाको मर्जर सजिलो विषय होइन । सञ्चालक समितिको र उच्च तहमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन चूनौतीपूर्ण छ । त्यसैले यसका लागि खुकुलो नीति आवश्यक छ । जस्तो, मर्जर भएको दुई वर्षसम्म दुई जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राख्न मिल्ने, एक अध्यक्ष र अर्काे सह-अध्यक्ष राख्न मिल्ने, सञ्चालक सदस्यको संख्या बढाउन दिने लगायतका सुविधा दिनुपर्छ । त्यसले इगो व्यवस्थापन गर्छ ।
त्यस्तै, मर्ज हुने संस्थालाई आयकर छुट दिने, स्प्रेड दरको सीमा घटाउनेलगायतका केही छुट दिनुपर्छ । सबैलाई ठूलो बैंक बनाउनु पर्छ भन्ने महशुस भएको छ । विगतमा जसरी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको खराब अवस्था थियो, संख्या घटेकाले उनीहरु बलियो बनेका छन् । संख्या घटेनन् भने वाणिज्य बैंकहरु पनि खराब अवस्थामा पुग्न सक्छन् ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हाम्रा लागि कुनै नयाँ समस्या होइन । नाकाबन्दी र कोभिडको समयमामात्र केही सहज थियो । अहिले पुनः असहज छ । अहिलेको समस्या आउनुमा ६ वर्ष पुरानो नीतिलाई दोष दिन मिल्छ ?
हामीले आजको तरलता अभावभन्दा पनि उक्त समयको कुरा गरेको हो । पुँजी वृद्धिको निर्णयपछि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ह्वात्तै बढेको थियो । जसको दवाव प्रणालीमा अहिले पनि छ । बैंक नै गएर गाडी नभएकालाई ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन्छु भनेर गाडी किन्न लगाए ।
मोटरसाइकल नभएकालाई मोटरसाइकल किन्न लगाए । घर नभएकालाई घर किन्न लगाए । बैंकले खर्च गर्न सजिलै पैसा दिए । त्यसले खर्च पनि बढायो । अहिले प्रायःले जग्गा बेचेर कर्जा तिरिरहेका छन् । त्यसले राम्रो अवस्था सिर्जना गरेन । हामीले पुँजी वृद्धिको नीतिले आजका दिनमा तरलता अभाव भयो भन्न खोजेका होइनौं । प्रतिवेदनमा हामीले बैंकिङ क्षेत्रको इतिहात केलाउनेदेखि भविष्यसम्मको बाटो देखाउने प्रयास पनि गरेका छौं ।
आजको तरलता अभावको कारणको असन्तुलितरुपमा वृद्धि भएको आयात हो । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा आयात ८२ प्रतिशतले बढेको छ भने रेमिट्यान्स २२ प्रतिशतले घटेको छ । वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन । सरकारले पछिल्लो ५-६ महिनामा वैदेशिक ऋण र सहायता पनि ल्याउन सकेको छैन । सरकारी खर्च हुन सकेको छैन । बैंकसँग भएको ८० प्रतिशतभन्दाबढी पैसा आयात गर्नमा प्रयोग भएको छ । जसले गर्दा तरलता अभाव भएको हो ।
प्रतिवेदनमा रियलस्टेट कर्जा र तरलता समस्याबाट भर्खर पार पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २ वर्षभित्रमा पुँजी बढाउनु पर्ने गरी २०७२ सालमा आएको मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा कैयौं ‘साइड इफेक्ट’ ल्याएको उल्लेख छ । उक्त नीतिले कस्तो साइड इफेक्ट ल्यायो भन्न खोजिएको हो ?
त्यसबेला २ अर्ब चुक्ता पुँजीको बैंक चलाइरहेको व्यवस्थापनसँग ८ अर्ब रुपैयाँको बैंक चलाउने क्षमता थिएन । हकप्रद सेयर जारी गरेर २ अर्बको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो । बैंकहरु कर्जा बढाउनु पर्ने तीव्र दबाबमा परे । त्यसले गुणस्तरीय कर्जा प्रवाह हुन सकेन । बचतमा धेरै ब्याजदर दिने र कर्जामा ब्याजदर घटाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्यो । त्यसले कैयौं जोखिम ल्याउन सक्छ । त्यही समय बैंकमा खराब कर्जा पनि बढेको थियो । बैंकले कर्जा असूल गर्दा सम्पत्ति लिलाम गरेकाले केही उद्यमी उद्यमबाटै पलायन पनि भएका छन् ।
अर्थतन्त्रको वृद्धिदरभन्दा जग्गाको मूल्य उच्चदरले बढ्नुका साथै कोरोना महामारीले पछिल्लो दुई वर्षदेखि बैंकहरुको कर्जा असूली प्रक्रिया केही सुस्त भएकाले पनि विगतमा प्रवाह भएका खराब कर्जाको असर देखिएको छैन भनिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
एकदमै सही हो । विगतमा रियलस्टेलमा कर्जा लगानी बढेको थियो । सजिलै पाएको पैसा मान्छेले धेरै सोच–विचार गरेर लगानी गर्दैनन् । जग्गाको मूल्य बढेकाले धेरै बैंकले कर्जाको सावाँ र ब्याज असूल गर्न सकेका छन् । यदि जग्गाको मूल्य बढ्न रोकिने हो भने ऋणी डुब्छन् । त्यसले बैंकलाई पनि डुबाउने जोखिम छ ।
तपाईंहरु जस्तो अनुभवी उद्यमी/व्यवसायीले बैंक चलाउनु भएको छ । अनुभवले खारिएका मानिसहरु व्यवस्थापनमा छन् । बैंक डुब्दा जनता (बचतकर्ता)को पैसा डुब्ने हो । तपाईंहरु पनि त संयमित हुनु पर्थ्यो नि ?
सिबिफिनको जन्म नै यस्तो नीतिगत विषयमा बहस हुनुपर्याे भनेर भएको हो । बैंक सञ्चालकहरुले एक–अर्कासँग छलफल गर्ने मञ्चनै थिएन । अब हामीले छलफल गर्न पाएका छौं । बैंक पैसामात्र कमाउने क्षेत्र होइन । यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि भएकाले हामी बैंकिङ व्यवसाय गर्नेहरुका केही कर्तव्य हुन्छन् । बैंकलाई आम्दानी नभए पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्छ । कृषि कर्जामा आक्रामक हुनुपर्छ । देश सुहाउँदो नीति ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा भइरहेका आक्रमण रोक्न लविङ गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो संस्था बनाएका हौं ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई कहाँबाट आक्रमण भइरहेको छ ?
आजको अनियन्त्रित डिजिटल प्लेटफर्म (मोबाइल वालेट)ले बैंकिङ प्रणालीलाई सबैभन्दा ठूलो आक्रमण गरिरहेको छ । युरोपमा बैंक एउटा कोठामा सीमित भइसकेका छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै भयो भने बैंकिङ क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ठूला संरचनाको के काम ? यसको मतलव, मोबाइल वालेटलाई रोक्नु पर्छ भन्न खोजेको होइन । जसरी बैंकिङ क्षेत्र उच्च नियमनमा छ, डिजिटल माध्यमलाई पनि सोही प्रकृतिको नियमन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामी अनलाई माध्यमबाट काम गरिरहेका छौं । के सबै तथ्यांक सुरक्षित छन् त ? सबै डाटा देश बाहिर लिकेज भइरहेको छ । हाम्रो हातमा केही पनि छैन । हामीले सजिलै सबै तथ्यांक अरुको हातमा दिइरहेका छौं । यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम छ । व्यवसायीहरुले पनि बैंकलाई नै आक्रमण गरिरहेका छन् । बचतको ब्याज घट्यो भने गाली बैंकलाई गरिन्छ । र, कर्जाको ब्याज बढ्यो भने पनि बैंकलाई नै गाली गरिन्छ ।
खुलाबजारमा सबै विषय नियन्त्रण गर्नु भएन । एकातर्फ हामी खुल्ला बजार भएको बताउँछौं भने अर्काेतर्फ सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जहिले पनि बैंकलाई गाली गर्ने गरेको छ । उहाँहरु स्प्रेडदर यति हुनुपर्याे, बैंकको प्रतिफल दर यति हुनुपर्याे, प्रतिसेयर आम्दानी यति हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । यो भन्ने अधिकार उहाँहरुलाई कसरी आयो ? र, कसले दियो ? हामीले उहाँहरुले ट्रेडिङ व्यवसायमा प्रतिफल दर यस्तो हुनुपर्छ भनेका त छैनौं । कहीँ कतै अस्वाभाविक नाफा भएको छ भने सरकारले भन्नसक्छ । राष्ट्र बैंकले भन्न सक्छ । राजनीति दल र सांसदलाई बैंकहरु बर्दिधारी गुण्डा हुन भनेर ‘ब्रेन वास’ गरिएको छ । जुन गलत हो ।
पुँजी बृद्धिको निर्णय गर्ने डेपुटी गर्भनर अहिले गभर्नर हुनुहुन्छ । उहाँबाट पुँजी वृद्धि नीतिमा कस्तो पुनरावलोकनको अपेक्षा गर्नु भएको छ ?
विगत र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक छ । अहिले भुक्तानी सन्तुलन डेढ खर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक छ । ७ महिनाको मात्रै आयात धान्नसक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । त्यसैले सरकार र राष्ट्र बैंकले आयात घटाउने गरि नीति लिनुपर्छ ।
कृषिको उत्पादन बढाउन आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्याे । गभर्नरसा’पले मात्र चाहेर हुँदैन । अर्थमन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक तीनवटै निकाय मिलेर काम गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने सूची निकालेको छ । त्यो पर्याप्त छैन । अब नगद मार्जिन राख्नुभन्दा पनि नगद मार्जिन राख्नु नपर्ने वस्तुहरुको सूची निकाल्नुपर्छ । औद्योगिक उपकरण, कृषि यन्त्र, पूर्वाधार निर्माणका उपकरण र कच्चापदार्थ बाहेक सबै वस्तु आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी निकायले आयात गर्ने भएपनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पनि नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
त्यसले आयात हुने वस्तुको मूल्य बढाउँछ र आन्तरिक उत्पादन बढाउन सहयोग गर्छ । भारतबाट हुने ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम मूल्यको आयात अझै पनि सिधैँ गर्न पाइन्छ । त्यसलाई घटाउनु पर्छ । भारतबाट १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको आयात गर्दा एलसी (प्रतितपत्र) खोल्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसले पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग गर्छ ।
अर्थमन्त्रालयले भन्सार विन्दुमा औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक सबै सामानमा १५ प्रतिशत ओमिक्रोन कर लगाउनु पर्छ । सामान्य अवस्थामा विश्व व्यापार संघको सम्झौताका कारण धेरै कर लगाउन पाइँदैन । तर, कोरोना महामारीले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भन्ने आधार पेश गरेर अतिरिक्त कर लगाउनु पर्छ । आयातित वस्तुको मूल्य बढ्छ भन्ने कुराको परवाह गर्नु हुँदैन । यसो गरियो भने मात्रै आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।
आजका दिनमा हामीले बजारबाट खरिद गरिरहेका सामानको लागत हेरेका छौं त ? भारतबाट प्याज आयात गर्दा भन्सार विन्दूमा प्रतिकेजी २ रुपैयाँमा खरिद भएको बिल बिजक पेश गरिन्छ । तर, उपभोक्ताले किलोको ४०/५० रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । यस्ता कैयौं वस्तु छन् । एकातिर कर छली भइरहको छ भने अर्कातिर उपभोक्ताले पनि लाभ पाएका छैनन् ।
पछिल्लो एक दशकको तत्यांक हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रले कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी बढाएका छन् । जसको प्रभावस्वरुप कृषि वस्तुको आन्तरिक उत्पादन बढ्नुपर्ने हो । तर, कृषि उत्पादन बढेर आयात घटेको देखिँदैन । कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा वास्तविक छ ?
प्रायः कर्जा वास्तविक नै छन् । तर, मेरो पनि प्रश्न छ, उत्पादकत्व किन बढेको छैन् ? सरकारले पनि कृषि क्षेत्रका लागि मोटो रकम अनुदान दिएको छ । त्यसको पनि प्रतिफल हेर्नु पर्ला । किसालले उत्पादन गरेका कृषिउपज बिक्री हुन सकेका छैनन् । त्यसैले, कृषि उपज आयातमा ट्यारिफ र नन ट्यारिफ ब्यारियर लगाउनुपर्छ । अनिमात्रै किसानले लाभ पाउँछन् । होइन भने किसानले कृषि उद्यम गर्न लिएको कर्जा तिर्न जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
नेपालमा पर्याप्त उत्पादन हुने कृषिउपज आयातनै नगर्न मिल्ने व्यवस्था वाणिज्य मन्त्रालयले मिलाउनु पर्छ । मलाई भन्नु हुन्छ भने त नेपालमा विदेशका सबै तरकारी र फलफू किन ल्याउनु पर्याे ? स्वदेशमा उत्पादन भएका तरकारी र फलफूल खाएपनि हुन्छ । जबसम्म कृषिउपज आयातलाई महँगो बनाइदैन् तबसम्म किसानले लाभ पाउँदैनन् । र, नेपालमा कृषिको विकास हुन सक्दैन ।
तपाईंले कृषि उपजमा सिमेन्ट उद्योगलाई दिएको जस्तो संरक्षण खोज्नु भएको हो ? सिमेन्ट उद्योगलाई सरकारले संरक्षण दिएको छ । नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको संख्यामा पनि वृद्धि भयो । तर, उपभोक्ता भारत र चीनभन्दा महँगो मूल्यमा सिमेन्ट किन्न बाध्य छन् । यस्तै, सरकारले कृषि उद्योगलाई संरक्षण दिँदा उपभोक्तालाई के लाभ हुन्छ ?
सरकारले कृषि उद्योगलाई संरक्षण दियो भने दुईतिहाई जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन् । हामीले सिमेन्टमा भारत र चीन भन्दा ३÷४ सय रुपैयाँ बढी तिरिरहेका छौं । लाभ कति प्रतिशत नेपालीले पाएका छन् ? यदि आलुमा प्रतिकेजी ५/७ रुपैयाँ बढी तिर्दा उपभोक्तालाई खासै असर पर्दैन । तर, लाभ कहाँ कहाँसम्म पुग्छ त्यसको पनि विश्लेषण गरिनुपर्छ । हामीले कानून निर्माता र कर्मचारी मनस्थिती परिवर्तन गर्नुपर्छ । संरक्षणले केही समय मूल्य बढ्ला तर कालान्तरमा क्षमता पनि त बढाउँछ । राज्यले दिने संरक्षण सधैंका लागि हुँदैन ।
सरकारले कुन उद्योगलाई संरक्षण लिने वा नदिने भन्ने नीति निर्मम भएर समीक्षा गर्ने समय आएको हो ?
एकदमै हो । सरकारले लिएको संरक्षणको नीतिले कति रोजगारी सिर्जना भयो । आर्थिक वृद्धिमा कस्तो योगदान दिएको विश्लेषण गरिनुपर्छ । र, आजका दिनमा कृषि क्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो संरक्षणको जरुरी छ ।
तपाईंले बैंकमा ५१ः४९ हुने संस्थापक र सर्वसाधारणको अनुपातलाई ३०ः७० बनाउनु पर्ने माग गर्नु भएको छ । संस्थापकको हिसाबले प्रतिफल कम आएपछि दोस्रो बजारमा सेयर बेचेर बाहिरिन अनुपात घटाउने माग गर्नु भएको हो ?
त्यो होइन । हामीले सेयरको सप्लाई बढाएर गाउँ-गाउँमा भएको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन यो प्रस्ताव गरेका हौं । आजका दिनमा सेयर बजारप्रति आकर्षण बढ्दो छ । त्यसलाई बढाउन सेयरको सप्लाई बढाउनु जरुरी छ । नयाँ कम्पनी कहिले आउने ? ती कम्पनीलाई लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने वा नगर्ने के हुने हो थाहा छैन । तर, बैंकको सेयरमा लगानीकर्ताले विश्वास गरिसकेका छन् । त्यसैले हामीले सेयरको सप्लाइ बढाउन संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयर बनाउनु पर्ने माग गरेका हौं ।
यस्तै, हाम्रो माग ‘क’ वर्गका बैंकलाई नदिने भए पनि ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सेयर ब्रोकरको काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने पनि हो । जसरी बीमाको बजार गाउँ-गाउँसम्म पुग्यो त्यसैगरी सेयर बजारको पनि विकास र बिस्तार गर्न एजेण्ट मोडालिटीमा काम गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनले बैंकको प्रतिफल घटेको तथा खर्च बढेको कुरा उठाएको छ । तर, मर्जरमा जान नसकिने बरु स्प्रेडको सीमा हटाउनुपर्ने तथा ग्राहकलाई नै बढी शुल्क लिनुपर्ने माग राख्नु भएको छ । राष्ट्र बैंकले व्यवहारिक नीति निर्देशन नल्याएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भनेपछि केन्द्रीय बैंकले कुरा नै बुझेन भन्ने सीबिफिएनको बुझाइ हो ?
केन्द्रीय बैंकले कुरा बुझेन भन्न त कहाँ मिल्छ र ? तर, बैंकको सेवा शुल्क कति लगाउने भन्ने त बैंकको अधिकार हुनुपर्छ । जसले राम्रो सेवा दिन्छ, उसले धेरै शुल्क त लिन पाउनु पर्याे नि । खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भनेको नै यही होइन ? स्प्रेड कति लिने भन्ने पनि त बैंकको आप्mनो अधिकार होला । मेरो उत्पादन मैले कतिमा बिक्री गर्ने त भन्न पाउनु पर्याे नि । जस्तो २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाइदैन् । तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ त ? एजेन्सी व्यवसाय गरिरहेकाहरुले २० प्रतिशत नाफा लिएर मात्रै काम गरेका छन् त ? र, नेपाल विद्युत् प्रतिकरणले त २०० प्रतिशतसम्म नाफा लिने गरेको छ ।
व्यवसायीले बैंकले मात्र लुट्यो अर्बौ रुपैयाँको नाफा कमायो भन्छन् । तर, बैंकले सेयरधनीलाई दिने प्रतिफल घट्दो क्रममा छ । के बैंकको नाफाको उच्च विन्दु यही हो ?
यदि हामीले बचत लिने र कर्जा दिने मात्र काम गर्यौ भने नाफाको उच्चतम विन्दु यही हो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन नमिल्ने, बचतमा कति ब्याज दिने भन्ने तोकिदिएको छ । सेवा शुल्क घटाएको छ । राष्ट्र बैंकका पछिल्लो नीतिले सुक्ष्म व्यवस्थापन गरिरहेको छ । यस्तै अवस्था रह्यो भने नाफा बढ्नेभन्दा पनि घट्ने क्रममा जानेछ । विदेशमा हेर्नु हुन्छ भने बचत लिने र कर्जा दिने बैंकले गर्ने एउटामात्र काम हो ।
सरकारले बैंकलाई काम गर्ने नयाँ-नयाँ क्षेत्र खोलिदिनु पर्छ । जस्तो, परामर्शदाताको रुपमा काम गर्ने, रुग्ण उद्योगको व्यवस्थापन लिएर सञ्चालनमा ल्याई बिक्री गर्ने, पुँजीबजारमा लगानी गर्ने केही नयाँ क्षेत्र हुन सक्छन् । विदेशमा बैंकले बीमा कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । बीमा कम्पनीले बैंक, यहाँ रोकिएको छ । त्यसलाई पनि खुला गर्नुपर्छ । यस्तै, नेपाली बैंंकलाई विदेशमा सहजै शाखा कार्यालय खोल्न दिनुपर्छ ।
प्रतिवेदनमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पनि वाणिज्य बैंकले गरिरहेका कैयौं काम गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिनु भएको छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उस्तै काम गर्ने हो भने बैंकको अहिलेको वर्गीकरण आवश्यक छ र ? अहिलेको वर्गीकरणलाई परिमार्जन कसरी गर्न सकिन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा कति तहका बैंक चाहिन्छ भन्ने प्रष्ट पार्नु पर्छ । ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वा ‘घ’ भन्नुस् वा पुँजीको आधारका वर्गीकरण भन्नुस् कुनै न कुनै किसिमको वर्गीकरण आवश्यक हुन्छ । अन्य देशको भौगोलिक र आर्थिक अवस्था फरक छ । त्यसैले हामीले कुन तहका बैैंकले कस्तो काम गर्ने प्रष्ट पार्नु पर्छ ।
जसरी अहिले ‘क’ वर्गका बैंकलाई गाउँगाउँमा जान बाध्य पारिएको त्यो त्यति राम्रो होइन् । पवन गोल्यानले किसानको समस्या बुझेको होला र मलाई गाउँमा जान पनि मन छ । सबै बैंकले सबै काम गर्न सक्दैन्् । साना कर्जा ‘क’ वर्गको बैंकले दिन सक्दैन् । अहिले १० थरी सहुलियपूर्ण कर्जा भनिएको छ । त्यो ‘क’ वर्गको बैंकले गर्न सक्दैन् । जबरजस्ती गर्न लगाइएको छ । बरु वाणिज्य बैंकले सहयोग गर्छ । हामीले सस्तो ब्याजमा पुँजी दिन्छौं । विकास बैंक वा फाइनान्स वा माइक्रोफाइनान्ससँगको सहकार्यमा काम गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
केन्द्रीय बैंकको मर्जर नीतिले एकजिल्ले, ३ जिल्ले बैंकको अस्तित्व सकियो । साना संस्थाले सानै ऋण पनि दिने गरेका थिए । आज राष्ट्रियस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्था साना खाले कर्जा दिन खासै मन गर्दैनन् । जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा लिने बानी गरेका व्यक्तिहरु साहू-माहजनकहाँ पुग्ने अवस्था आउँदैछ भन्ने विश्लेषण पनि सुनिन थालेको छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
सहरी क्षेत्रमा मात्र सस्तो ब्याजमा कर्जा पाइने तर गाउँमा बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । गाउँ पनि त नेपाल नै होला नि होइन र ? । काठमाडौंमा १० प्रतिशत ब्याजमा पाइने कर्जा गाउँमा २२/२४ प्रतिशत लिने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । गाउँगाउँमा पुगेका माइक्रोफाइनान्स वा फाइनान्स कम्पनीका माध्यमबाट सानो कर्जा सस्तो ब्याजदरमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । वाणिज्य बैंकहरु आफैंभन्दा एजेन्सी मोडालिटी वा सेयरिङ मोडालिटीमा काम गर्न इच्छुक छन् । सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्याे । त्यसो हुन सके साहुमाहजन फष्टाउने काम बन्द हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशबाट कर्जा ल्याउन सक्ने गरी सजिलो व्यवस्था पनि गर्याे । तर, केहीले बाहेक अन्य बैंकले उक्त व्यवस्थाको उपयोग गर्न सकेनन् । यसलाई नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता नबढेको अर्थमा किन नबुझने ?
क्षमता भएकालेपनि ल्याउन नचाहेको हुनसक्छ । ल्याउन खोजेकालाई विदेशीले नपत्याएको पनि हुनसक्छ । त्यसैले पनि बंैक संख्या घट्नुपर्छ । म कसैको नाम लिन्न । केही बैंकले चाहेर पनि विदेशबाट कर्जा ल्याउन सक्दैन । यो नीति राम्रो हो ।
तपाईंलाई बैंकर भन्ने कि व्यवसायी भन्ने ?
मलाई किसान भनेर चिन्नुस । म बैंकर होइन । मैले कुनै वस्तु आयात गरेर ट्रेडिङ व्यवसाय गरेको छैन् । हाम्रो देशमा एउटा कुनै विदेशी बाण्डको एजेन्सी लिएर गर्व गर्नेको कमी छैन् । यो पैसा कमाउने धेरै सजिलो उपाय हो । तर, नेपाली उत्पादनलाई उत्पादन गरेर निर्यात गर्नेको कमी छ । तपाईं भन्नुहुन्छ भने मलाई उद्योगी भन्नु होस् ।
बैंकर र व्यवसायी छ्ट्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा व्यक्तिगतरुपमा तपाईंको र सिबिफिनको धारणा के हो ?
व्यवसाय गर्ने मानिस बैंकर हुनु हुँदैन भन्ने अवधारणा नै गलत छ । मानिसको नियत राम्रो भयो भने कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट (स्वार्थ बाझिने) समस्या कतैपनि आउँदैन । नियत सफा भएन भने त जुनसुकै व्यवसाय गरेपनि समस्या नै आउने हो ।
तपाईं आजका दिनमा व्यवसायिक व्यक्तिले मात्र चलाएको बैंक र व्यवसाय बुझेका सञ्चालकले चलाएको बैंकको तुलना गर्नुस् । जहाँका सञ्चालकले व्यवसाय बुझेका छन्, त्यहाँको ग्रोथ रेट राम्रो छ । यो सोच नै गलत हो । यो सोच बैंकका कर्मचारी वा सरकारी कर्मचारीमात्र सञ्चालक समितिमा बस्न पाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले आएको हो ।
सिबिफिनको धारणा पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी आउँनु हुँदैन नै भन्ने हो । टाढा जानै पर्दैन, भारतकै कुरा हेर्नुस् । कर्मचारीको नियन्त्रणमा रहेका बैंकले व्यवसायीलाई ठूलो रकम कर्जा दिँदा कस्तो असर पारेको छ ? व्यवसायिक व्यक्तिले आफ्नो पैसा लगानी गरेका हुँदैनन् । तर, व्यवसायी सञ्चालक समितिमा हुँदा उसले आफ्ना लगानी नडुब्ने गरी निर्णय लिन्छ ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने बैंकिङ क्षेत्र केही सीमित व्यवसायिक घरानाको नियन्त्रणमा रहँदा त्यसले त समस्या पार्छ होला नि ?
यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दोहोरो नीति लिएको छ । एकातर्फ बोर्डलाई सबै जिम्मेवारी दिएको छ । बोर्डमा व्यवसायी बस्नु हुँदैन पनि भनिएको छ । अर्कातर्फ संस्थापक सेयरधनीलाई सबै सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन दिएको छैन । सेयर बिक्री गर्न किन नदिएको भन्ने प्रश्नमा राष्ट्र बैंकको तर्क हुन्छ, संस्थापक सेयरधनी बाहिरिएपछि बैंक कसले हेर्छ ?
बोर्डमा बस्नु हुँदैन भन्ने अनि बैंक कसले हेर्छ पनि भन्ने ? यो त मिलेन । यसमा पनि सरकारले प्रष्ट नीति लिनु पर्याे । सरकारलाई बैंक सीमित घरानाको नियन्त्रणमा भयो भन्ने लागेको छ भने सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन दिनुपर्छ । त्यसपछि त दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गरेर बैंकको व्यवस्थापनमा आउन मन लागेका व्यक्तिहरु आइहाल्छन् ।
तपाईं उद्योगी पनि हुनुहुन्छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको वार्षिक व्यापार ७ अर्ब रुपैयाँको देखिन्छ । तपाईंलाई प्रतिफल रिलायन्सबाट बढी छ कि आफू अध्यक्ष भएको बैंकबाट ?
मेरो समय बैंकमा धेरै लाग्छ । बैंकबाट त केही पनि प्रतिफल छैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउने मेरो प्यासन हो । त्यसैले म बैंकिङ क्षेत्रमा छु । हाम्रो बैंकले बैंक अफ दि इयर एसियाको अवार्ड पाएको छ । एशियाली देशहरुमा हाम्रो बैंक उत्कृष्ट भएको हो । यो किनेर आएको अवार्ड त होइन । त्यसैले बैंकिङ मेरो प्यासन हो । तर, प्रतिफल त उद्योगबाट नै बढी छ ।
बैंकले व्यवसायीलाई दुःख दिन्छन् कि व्यवसायीले ?
मेरो बिचारमा ९९ प्रतिशत व्यवसायीले बैंकलाई दुःख दिँदैनन् । १ प्रतिशत व्यवसायीले लुपहोलको फाइदा उठाएर दुःख दिन्छन् । बैंकले व्यवसायीसँगै हातेमालो गरेर काम गर्ने हो । यस विषयमा सरकारको नीतिमा समस्या छ । उत्पादनमुलक उद्योगलाई सहुलियत दिने नीति सरकारको छ । तर ८० प्रतिशतभन्दा बढी लाभ ट्रेडिङ व्यवसायीले पाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सरकारसँग ब्याज चर्काे भयो भन्ने माग गर्छन् । सरकारले पनि उहाँहरुकै कुरा सुन्छ । उहाँहरु नाम कृषि र उद्योगको लिनुहुन्छ । तर, लाभ टे«डिङले पाएको छ । तपाईंले तथ्यांक केलाउनु भयो भने सबैभन्दा सस्तो ब्याज कर्पाेरेट टे«डिङमा छ । उत्पादनमुलक उद्योगलाई बढावा दिने हो भने टे«डिङभन्दा कम्तीमा ४ प्रतिशत ब्याज सस्तो हुनु पर्छ । त्यसले धेरै समस्या समाधान गर्छ ।
परिसंघको कार्यक्रममा तपाईंले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीको आधारमा २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउनु पर्ने बताउनु भयो । २० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउनु पर्ने आधार के हो ?
सरकारले तथ्यांक अनुसार ४० लाख नेपाली वैदशिक रोजगारमा छन् । औषतमा एकजनाले वार्षिक ६ हजार अमेरिकी डलर कमाउँदा पनि २ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर आम्दानी हुन्छ । उनीहरुले खर्च गरेर पनि कम्तीमा २० खर्ब रुपैयाँ त रेमिट्यान्स आउनु पर्ने हो । तर, बैंकिङ प्रणालीबाट ८ खर्ब रुपैयाँ मात्र आएको छ । बाँकी रकम पनि विभिन्न गैरकानूनी माध्यमबाट आएकै छ । सरकारले यस विषयमा खोजी गर्नुपर्छ ।
यस्तो अपराधमा को संलग्न छन् ?
राज्यले लुपहोल छोड्यो भने अपराध त हुन्छ । सरकारले प्वालनै बन्द गर्नुपर्छ ।
प्वाल कहाँ छ ?
वैदेशिक रोजगारमा जाँदा नै तोकिएको तलबको ८० प्रतिशत रकम बैंकिङ प्रणालीबाट आउने गरी सम्झौता गरेर पठाउन सकिन्छ । यसले गैरकानूनी काम रोक्न सहयोग गर्नेछ । न्यून मूल्यमा हुने आयातलाई राक्ने सरकारले वस्तु तथा सेवाको न्यूनतम मूल्य तोक्नुपर्छ ।